၂၀၂၀ | သင်၏မျက်နှာဖုံးကိုနှင်းလျှောစီးရာသီဖြစ်သည့် ULLER
နှင်းဖုံးများ ၂၀၂၀ နှင်းလျှောစီးရာသီအတွက်သင်၏မျက်နှာဖုံးကိုအသစ်ပြန်စပါ။
နှင်းဖုံးနေတဲ့နေ့တွေငါတို့ကိုသီချင်းဆို! နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများတွင်ဆီးနှင်းများအလွန်များပြားသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဝမ်းသာကြသည်။ သံသယမရှိပါ - မြင်းစီး နှင့်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါအများဆုံးထွက်မထင်မှတ်သောသူများဖြစ်ကြသည် နှင်းလျှောစီးရာသီ,လာမယ့်တံတားရောက်လာရင်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူသွားဖို့စနေ၊ လွတ်အများဆုံးအစွန်းရောက်ခုန်ခြင်းနှင့်လှည့်ကွက်လုပ်နေတာ။
ဆီးနှင်းအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီးကိုနှစ်သက်သူများနှင့် နှင်းလျော သူတို့ကအသစ်စက်စက်ပြိုလဲနေသောဆီးနှင်းများကိုအမြဲတမ်းနှစ်သက်ကြပြီးအမှန်တရားမှာနွေရာသီ၌ပင်အနီးဆုံးဘူတာများတွင်နှင်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရခြင်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့်အရေးယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တဖန်သင်တို့ ... သင်၏အအပါအဝင်သင့်ရဲ့နှင်းလျှောစီးပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးအဆင်သင့်ရှိပါသလား 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ဒီနှင်းလျှောစီးရာသီအတွက်?
နှင်းဖုံးနေသည့်ဒေသများသို့သင်အစဉ်အမြဲသယ်ဆောင်သင့်သည့်အရေးကြီးဆုံးအားကစားပစ္စည်းများအနက်တစ်ခုမှာသင်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်သည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးပါကအရေးမပါ နှင်းလျော ဒါမှမဟုတ်နှင်းလျှောစီး၊ 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သင့်ရဲ့အားကစားအသင်းမှာသူတို့ပျောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆီးနှင်းအားကစားကို“ မှော်” နီးပါးထိခြင်းမရှိဘဲလေ့ကျင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် သူတို့ပေးတယ် မြင်းစီး ပြီးတော့ငါတို့ကိုအမြဲသယ်ဆောင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်! သင်ဘယ်ရာသီသို့သွားပါစေရာသီနှင့်ဆီးနှင်းအမျိုးအစားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ... 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သူတို့ကတစ် ဦး ဖြစ်ကြသည် ရ!
နှင်းဖုံးနေသောဒေသများသို့သင်သွားစဉ်မျက်မှန်သို့မဟုတ်မျက်နှာဖုံးကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်သင့်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုသင်သိနှင့်ပြီလော။ သင့်ရဲ့သက်တမ်းတိုးဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာသေချာပါတယ် နှင်းဖုံးမျက်နှာဖုံးများ နှင့်ဤအဘို့ပြင်ဆင်ပါ ရာသီ နှင်းလျှောစီး အကောင်းဆုံးကိုဝတ်ဆင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်!
နှင်းအားကစားသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလူများဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ အံ့အားသင့်မိပါသည်။ မြင်းစီး ဒီနေ့ခေတ်အပြင်စွန့်စားခန်းတွေအတွက်ပေးဆပ်ကြတဲ့စီးကရက်မျိုးဆက်သစ်တွေပါ။ သို့သော်ဆီးနှင်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာမှန်ကန်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အပန်းဖြေစခန်းများသို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အစပြုသမားများနှင့်ခရီးသွား visitors ည့်သည်များနှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏အမြင်ကိုကာကွယ်ရမည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် နှင့်နေကာမျက်မှန်။ ဆီးနှင်း၏မျက်လုံးများနှင့်အမြင်အာရုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျင်မြန်စွာနီးပါးတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နှင်းဖုံးနေသောဒေသများ၌“ ဆီးနှင်းမျက်စိကွယ်မှု” အပါအဝင်မျက်စိကာကွယ်မှုကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
Snow Snow blindness သည်နှင်းဖုံးဒေသများရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည်အလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းမှခံစားနိုင်သည့်မျက်စိဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအမည်မှာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး keratitis ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို“ photokeratitis” ဟုလည်းလူသိများသော်လည်း၎င်းတွင်မျက်ကြည်လွှာဟုခေါ်သောမျက်စိ၏အပြင်ဘက်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောနေရာတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းပါဝင်သည်။
ငါတို့တွေအမြဲသယ်ဆောင်ရမယ် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် အလင်းရောင်နှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်အလွန်များခြင်းကြောင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် ၆ မှ ၁၂ နာရီအကြာတွင်ဆီးနှင်းမျက်စိကွယ်မှုလက္ခဏာများကိုမခံစားရရန်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးမှဒဏ်ရာကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်များသောရောဂါလက္ခဏာများတွင်အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်း၊ အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းခြင်း၊ မျက်လုံးနီခြင်း၊
နှင်းဖုံးရောင်ပြန်ဟပ်နေသောသက်ရောက်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုဂရုပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်နှင့် Ocular acuity အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ဆီးနှင်းသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ထားခြင်းသည်အမြဲတမ်းအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိဂရုစိုက်ရန်။
အကြားနှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်ရာသီ မြင်းစီး နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၊ ၎င်းတို့သည်မမေ့နိုင်သောအချိန်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ၎င်းတို့ကိုပျော်မွေ့ရန်အခွင့်အရေးရှိပါကမလွဲမရှောင်သာဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်စွန့်စားမှုနှင့်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအလွန်အလေးအနက်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ နှင်းဖုံးမျက်နှာဖုံးများ။
ဤအကြောင်းပြချက် ၂ ခုကြောင့်နှင်းဖုံးဒေသများသည်မျက်စိအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုးရွားသည်။
ဆီးနှင်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၈၀% အထိရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းသင်သိပါသလား၎င်းသည်ရေထက်လေးဆပိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုဂရုစိုက်ရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
နှင်းဖုံးဒေသများ၏အမြင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ နေရောင်ခြည်၏အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နှင်းဖုံးဒေသများတွင်တိုးပွားလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပမာဏသည်မြင့်မားသော ၁၀၀၀ မီတာတိုင်းအတွက် ၁၀% တိုးစေပြီးလေထုစစ်ထုတ်မှုကိုလျှော့ချသည်။
နေရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်မိုးအုံ့ဆုံးနေ့များအပါအ ၀ င်နှင်းဖုံးနေသောနေရာများတွင်ခြွင်းချက်မရှိပါ။ ဤareasရိယာများသည်အမှန်တကယ်တွင် ပို၍ ဂရုစိုက်ရန်ပိုမိုသတိထားရမည့်မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အခြေအနေများသည်နှင်းများအတွင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေများကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းသောဝတ်ဆင်ရပေမည် 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး အကာအကွယ်ပေးသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အာရုံကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကောင်းမွန်သောအမြင်ကိုအာမခံရန်နှင့်မည်သည့်ပြင်းထန်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမဆိုကျူးလွန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး keratitis အဖြစ်လူသိများသည်အရာအပြင်, ကအမြဲဝတ်ဆင်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် ထိုကဲ့သို့သောလွှာဒဏ်ရာ, ပိုလျှံကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေများမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် မျက်စိ strain နှင့် အမြင်အာရုံတင်းမာမှု။ ဤအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ကြဉ်သည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုကာကွယ်ပြီးနေ့တိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည် မြင်းစီး.
အကောင်းဆုံးဆီးနှင်းကာမျက်မှန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကို skiers သို့မဟုတ် snowboarders များနှင့်ကိုက်ညီစေပြီး၎င်းအားသင့်အားနေနှင့်ဒြပ်စင်မှကာကွယ်ပေးသောအရည်အသွေးမြင့်ကာမျက်မှန်များဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် homologated နှင့် ISO စံနှုန်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး CE မှသူတို့၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုဥရောပသမဂ္ဂ၏အာမခံချက်ဖြင့်ပြသရမည်။
ဖြစ်ရမည် 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုနှောင့်အယှက်ထင်ဟပ်ရှောင်ရှားရန်ကူညီ polarized ။
၎င်းတို့သည်နေမှအနည်းဆုံး ၉၀% အထိကာကွယ်မှုပေးသည်။ ဒီထက်နည်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
၄ င်းတို့သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UV-400 ကာကွယ်မှုရှိရမည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် thermoplastic polyurethane ကဲ့သို့သောပုံသွင်းသောပိုလီကာဗွန်နိတ်များဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။
သူတို့ဖြစ်ရမယ် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အလင်းရောင်သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အတွက်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ဖြစ် နှင်းလျှောစီးမျက်မှန် Anti-slip ညှိနှိုင်းမှုသိုင်းကြိုးနှင့်အတူ။
သူတို့ဖြစ်ရမယ် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် လေထဲကိုပြန်လည်လည်ပတ်မှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်သင်၏မြင်သာမှုကိုအာမခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အတွင်းကိုယ်ခံအားကောင်းစေသည့်လေဝင်လေထွက်စနစ်ပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတို့တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချက်များအနက်မှအလွှာ anti fog system ရှိသည် (antifog) ဒါကြောင့်သူတို့အသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့တက်မြူကြဘူး။
Snow မျက်မှန် 2020: ခေတ်ရေစီးကြောင်း
၏ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုအရောင်၊ အရွယ်အစား၊ ဒိုင်းနမစ်နှင့်ဘောင် ၄ ခုပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီနှစ်လမ်းကြောင်းကကာကွယ်ပေးသူများအပြင်သင့်ကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်အောင်တောက်ပသောအရောင်များကိုဝတ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်2020 / 2021သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
သို့သော်ယခုနှစ်တွင်အကြီးမားဆုံးလမ်းကြောင်းမှာနောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာဖြစ်သည် 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး: High-Tech Performance Optics X-POLAR သည် 2020/2021 ၏နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်အသစ်များ ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားခြင်းသည်အာရုံကြောအချို့ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်လိုက်နာရန်လိုအပ်သောအကြံပြုချက်များကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလျှင်သင်အားလုံးအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
ရှေးခယျြ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် UV400 နေရောင်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုထားသည်။
ရှေးခယျြ နှင်းလျှောစီးမျက်မှန် အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သောမှန်ဘီလူးများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြူ၊ မိုး၊ နှင်းလျှောစီးရာသီ 2020.
သင်သည်အားကစား optical ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သောအခါဤဝိသေသလက္ခဏာများကိုသင်စဉ်းစားမိလျှင်မှားသွားခြင်းမဟုတ်ဘဲအကောင်းဆုံးအရာများကိုရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး.
နွေရာသီဖြစ်ပါစေ၊ ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါစေ ... မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသူများသည်ဆီးနှင်းများကိုမြင်သည့်အတွက်နှင်းလျှောစီးများနှင့်နှင်းလျှောစီးသူများဤကိစ္စကိုရှုပ်ထွေးစေရန်အဆင်သင့်ရှိလိမ့်မည် နှင်းလျှောစီးရာသီ။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုက၎င်းကိုကောင်းစွာသိသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မဆိုင်းမတွအမြဲတမ်းသင်၏ကောင်းသောယူပါ 2020 နှင်းကျကိုမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး စွန့်စားခန်းမှာတွေ့မယ်
ဆောင်းရာသီအားကစားတွင်စတင်ရန်သင်စဉ်းစားနေပါက၊ မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုရွေးချယ်သောအခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်၊ မည်သည့်ပုံစံကိုသင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်နှင့်နားလည်ရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်၏ Snow Goggles ဖြင့်အဝေးမှဆင်းသက်ခြင်းအကောင်းဆုံး freeride!
နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်တပ်ခြင်းအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်ဟာနှင်းလျှောစီးအားကစားလောကထဲကိုဝင်ရောက်နေပြီလား၊ သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဆီးနှင်းမျက်မှန်ကိုပိုကောင်းအောင်၊ ပိုကောင်းအောင်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသူတွေနဲ့အစားထိုးချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးပုံသေနည်းရှိတယ်။
နှင်းဖုံးတွင်အစွန်းရောက်အားကစားကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်ကောင်းမွန်သောနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးများကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သဘာဝတရား၏အန္တရာယ်ကိုကျော်လွှားရန်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။5ကိုရှာဖွေပါ
ဤအားကစားကို၎င်း၏ပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်လေ့ကျင့်သောအခါနှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်တပ်ထားခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင်းလျှောစီးပုံစံများကိုသင်သိနှင့်ပြီလော။ အကောင်းဆုံးသောပုံစံများကိုသိရန်ဆက်ဖတ်ပါ